Tag: is afgarad | Martech Zone
Tag: is afgarad
Wednesday, May 4, 2016 Khamiis, May 5, 2016 Douglas Karr
Intii aan ku guda jiray cilmi baarista mawduuca xayeysiinta, waxaan ku dhacay xog ku saabsan sida Xayeysiintu nooga dhigeyso Iibsasho. Xogta hoose waxay ku fureysaa fikradda ah in shirkaduhu ay hodan yihiin oo ay leeyihiin lacago faro badan oo ay u adeegsadaan inay ku maareeyaan dhagaystayaashooda saboolka ah. Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay mid kaxun, nasiib darro, iyo fikrad aan macquul ahayn. Fikradda koowaad ee shirkadaha kaliya ee taajiriinta ah xayaysiiyaan waa fikrad yaab leh. Shirkadeena ma ahan mid hodan ah, runtiina, waxay lahayd lamaane